wallpapers buluug ugu fiican ee Mac | waxaan ka imid mac
Ka dib markii aan ku keenay meeshan, ugu fiican wallpapers ee mac iyo kan ugu wanaagsan asalka buuraha y xeebta, waa inaan kuu soo dhawaadaa wallpapers ugu fiican ee Mac buluug ah. Midabkan, oo dhererkiisu u dhexeeya 460 iyo 482 nm, ayaa dad badani aad ugu mahadcelinayaan awooddooda bogsashada, awoodda ay ku dejiyaan dadka iyo wax kasta oo ka sarreeya sababtoo ah waa midab dhexdhexaad ah oo ku dhawaad ​​qof kastaa jecel yahay. Buluugu waa midabka biyaha, cirka, waxaanan u aragnaa wax dabiici ah. Taasi waa sababta midabkani sida wallpaper uu yahay midka ugu fiican ee aad dhigi karto.
Gelitaankan cusub oo aan rajaynayo in aan kuu keeno gidaarada buluuga ah ee ugu wanaagsan, laga bilaabo mid aan la dhayalsan karin. Badda: Xaaladdan oo kale waxaan doortay biyaha deggan ee dareeraha lagama maarmaanka ah ee laga helo saamiga weyn ee dhulka. Si kastaba ha ahaatee, sir, ayaa inta badan la rumeysan yahay in baddu tahay buluug, sababtoo ah waa muraayadda cirka, si kastaba ha ahaatee xubno ka tirsan Maamulka Badweynta iyo Cimilada ee Maraykanka (NOAA) ee Maraykanka ayaa caddeeyey in fikraddaani khaldan tahay. Sida ay khubaradu sheegeen. baddu waa buluug sababtoo ah waxay ka tarjumaysaa iftiinka qorraxda. Run ahaantii, baddu waa shay aad cajiib u ah oo dad yar oo aan aqaano aanay odhan waa wax cajiib ah oo dhib isku mar ah.
Waa inaan qiraa inaan jeclahay inaan awoodo inaan arko biyaheeda, haa, ilaa inta ay ku jiraan xasiloon iyo maalintii. Habeenkii aad iyo aad buu i cabsiiyaa oo marka ay biyuhu go'aan ama marka ay hirarku badan yihiin waxay i siiyaan ixtiraam badan. Inkasta oo aan ogahay in ay tahay Grail-ka Quduuska ah ee kuwa badan oo raadinaya hirarka si ay u awoodaan in ay dhex maraan, waxaan doorbidayaa in aan sii joogo ciidda daawashada sida kuwa kale u sameeyaan.
Hadda, midabka baddu ma noqon karo buluug, sababtoo ah midabka cirku maaha mid ka muuqda, sababtoo ah cirku waa buluug. Hagaag mar walba, dabcan. Waxaan leenahay qorrax dhaca, qorrax-soo-baxa, xataa qorrax dhaca kuwaas oo dab u eg oo cirka cas cas. Laakiin dabcan haddaynu nidhaahno ka fikir wax buluug ah, isla markaaba janada ayaan galeynaa Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in this post in ka qabashada wallpapers buluug ugu fiican ee Mac, ma ilaawin oo ku saabsan cirka. Waa kuwan sawirro aan hubo inaad jeclaan doonto.
Aan sii wadno dhex marada midabka buluuga ah, in wax walba aysan ahayn biyaha iyo cirka. Waxaan helnaa midab mid ka mid ah saacadaha maalinta oo ay qadariyaan sawir qaadayaal badan. Waxaa la yiraahdaa saacad buluug ah, Waxa kale oo loo yaqaan saacadda sixirka oo hadda waad ogaan doontaa sababta. Qeexid ahaan waa wakhtiga ka horreeya qorrax-soo-baxa iyo ka hor qorrax dhaca. Iftiinka munaasabaddan waa mid jilicsan, fidsan, sixir. Wax kasta oo aad aragto ayay ka dhigaysaa mid deggan. gidaarada soo socda, waxaad arki doontaa sababta ay sixir u tahay. Wax kastaa waxay qaataan qaab kale oo midabadaas ayaa si dabiici ah u bixiya sixirka.
Midabada ayaa aad muhiim u ah. Sidaan horey u sheegay, buluug wuxuu u eg yahay xasilloon. Midabku waxay awood u leeyihiin inay kiciyaan niyadda kala duwan, si ay u abuuraan shucuur. Buluugu waa midab la xidhiidha dabeecadda. Markaan aragno cirku sidii kuwii hore oo kale, waxaan aragnaa in maalintu caddahay oo xasiloon tahay. Taasi waxay ina dareensiinaysaa wanaag. Laakiin sida aan ku aragnay sawirada saacadda buluuga ah, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale awoodno inaan la xiriirno meelo qabow iyo xitaa baraf. Haddii aan si taxadar leh u fekerno, hadhka buluuga ah waxay isku daraan muuqaalada barafka iyo barafka. Laakiin taasi sidoo kale aad ayay caan ugu tahay inta badan dhimashada.
Laakiin buluug kaliya maaha dabeecadda. Waxaan meelo badan ku aragnaa buluug waana midab la mid ah kuwa kale oo badan. Waa midab aad waxtar u leh. Dhab ahaantii, waxaa jira wallpapers aad u wanaagsan oo isticmaalaya midabka buluuga ah sawiro lagu magacaabo fikradeed. Kuwa aad mooddo in aanay waxba odhan ama wax macno ah samaynayn balse ku soo qabta isla marka aad aragto iyaga oo aanad awoodin in aad iska dayso fiirintooda. Waxaad si waxtar leh ugu timid sida gidaarada Mac-yadayada. Waa kuwan qaar aan filayo inaad jeceshahay.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa sawirro muuqaalo leh buluug sida jilaa. Waa run in haddii aynaan isticmaalin oo keliya cirka, badda ama saacadda buluugga ah, fursadaha waxay u muuqdaan kuwo aad u yar laakiin waxaa jira. Tusaalooyinka qaar ayaanu soo qaadan doonaa waxaanan hubaa in qaarkood la dooran doono ugu yaraan marka aad ku wehelinayso hawshaada kombiyuutarka.
Waxaan sidoo kale dooran karnaa sawiradaas, inkastoo aan ognahay inaysan dhab ahayn, waxaan ku dari karnaa iyaga sababtoo ah, ka dib oo dhan, waxa ay ku saabsan tahay waxay siinaysaa midab yar muraayadaha kumbuyuutarka. gidaar indhahayaga ka farxiya markaan shidno. Taasi waa sababta aan sidoo kale u doonayo in aan ku daro qaar ka mid ah Anigu shakhsi ahaan waan jeclahay iyaga Oo waxaan hubaa inay sidoo kale ku farxi doonaan.
By habka, waxaa jira wallpapers midab badan buluug oo gebi ahaanba aan la taaban karin Taasina waxay u anfacaysaa dadka doonaya minimalism-ka Mac-ga. Waxaan u isticmaalaa ereygan sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo raba in lacagtooda ay noqoto mid macquul ah oo suurtogal ah si ay diiradda u saaraan waxa loo arko inay aad muhiim u yihiin. Maskaxda ku hay in tan, ay la mid tahay dhadhanka iyo sida ay yiraahdaan, dhadhanka midabada. Laakiin kiiskan waxaan diiradda saareynaa buluug.
Sida aynu sheegnay buluuggu waa xasillooni iyo xasillooni. Laakiin taas ayaan kuu xaqiijinayaa sidoo kale waa midabka kaftanka, ugu yaraan inta kombuyuutarku khusayso. Hadda waad garan doontaa sababta aan kuu sheego. Maskaxda ku hay inay ii muuqato mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee ay dooratay shirkadda Microsoft. Shaashada buluugga ah ayaa xitaa loo adeegsaday hawl maalmeedka nolosheena. Anagoo tixgelinayna in ay ka dhigan tahay in wax aad u xun ay dhaceen oo uu yahay xabaalaha wax dhammaanaya. Sidee loo doortaa midabka buluuga ah si looga digo wax xun? Si kastaba ha ahaatee, waa Windows hehehehe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Waraaqaha buluuga ah ee ugu fiican Mac
AirPods Max kaliya 415 euro oo Amazon ah